Dagaal Browser: Internet Explorer ayaa sii wadaya inuu Khasaarayo Firefox, Maxaa Safari ah? | Martech Zone
Khamiis, Agoosto 23, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Guji jaantuska si aad u aragto cabirkiisa oo buuxa. Labada daalacda ay isha ku hayaan waa Internet Explorer iyo Firefox. Wadarta gelitaanka Internet Explorer ayaa hoos u dhacaysa saamiga Internet Explorer 7na wuxuu umuuqdaa inuu sii dhacayo under Firefox!
Ilaha xogta: W3Schools
Safari xitaa wax saameyn ah kuma yeelan, xitaa isku daygeeda ah inay ku riixdo suuqa Windows. Waxaa laga yaabaa in qayb ka mid ah dhibaatooyinka Safari ay yihiin arrimaha degdegga ah ee laga xishoodo ee amniga ee lagu soo saaray 2 saacadood gudahood markii ay soo dejisay Lar Larm.
IMHO, arrinta ku saabsan Internet Explorer kaliya waxaa u sabab ah laba sababood:
The Kooxda Internet Explorer Jaahil sii waday CSS heerarka. In kasta oo ay u egtahay in tani ay noqonayso boqolkiiba in yar oo dadka ka mid ah, haddana dadka ayaa muhiimad weyn siin kara inay shisheeyaha yihiin - kuwa horumariya.
Waxaan u ekaan karaa inaan necbahay Internet Explorer, laakiin dhab ahaan waan u isticmaalaa maalin kasta. Waxay umuuqataa inay sifiican usameynayso iyo, marka jabsiga bogga lafuliyo, bixinta bogaggaas waa qurux badan. Waxaan si joogto ah ula halgamayaa adeegsiga arjiga, in kastoo, isla marka aan isku dayo inaan isticmaalo menu. Meeleynta qosolka leh ee menus-ka midig waa cillad aasaasi ah. Fiiri codsi kasta oo liisaska oo dhan waxay u jeedaan dhinaca bidix, maahan midig.
Waxaan dhawaan ku raray Vista on wiilkayga, Bill's, PC qaylinaya cusub oo waa inaan kuu sheegaa in interface uu dhalaalayo, gaar ahaan leh Saamaynta hawada ee socota. Bill wuxuu awooday inuu ku rakibo Office 2007 iskuulka waana jeclahay Nidaamka menu-yada. Waqti ayey igu qaadan kartaa si aan u ogaado meesha wax walba yaalliin - laakiin illaa hadda, muuqaal kasta waxaa si macquul ah loogu habeeyay muuqaallo cajaa'ib leh oo si sax ah u metelaya ficilka.
Marka la fiiriyo Khibradaha Isticmaalahan iyo Isticmaalka aaladaha muhiimka ah ee Microsoft, waxaan layaabay in kooxda Internet Explorer aysan soo wicin wax caawimaad ah.
Ha i dhageysan, inkasta oo… kaliya isha ku hayso tirakoobka.
GoDaddy wuxuu sheeganayaa jebinta astaanta ganacsiga ee Go-Daddy domain laga soo iibsaday GoDaddy
Agoosto 23, 2007 saacaddu markay ahayd 11:14 PM
Waa maxay tirooyinka lagu metelay sawirkaaga? Taasi ma boggaaga ayaa? Goob xisaabeed?
Waa maxay isha laga helayo xogtan?
somalia @ IDT
Waxaan dhawaan aqrinayay faallooyinka Lifehacker ee ah in tirooyinka w3schools aysan fiicneyn maxaa yeelay dhammaantood waxay diiradda saarayaan dadka sameeya naqshadeynta websaydhka - taas oo ah heer aad u sarreeya oo ah korsashada Firefox marka loo eego dadka kale.
Wali godad ku filan ugama qodnayn.
Dean @ Cuncunka Farsamada
Waxaan maqlay faallooyinkaas sidoo kale ku saabsan naqshadeynta websaydhka. Aniga shaqsi ahaan waxaan u adeegsadaa Firefox in kastoo mararka qaar IE aan laga fursan karin, gaar ahaan marka aad bilowdo inaad isticmaasho alaabooyinka kale ee Microsoft ku saleysan websaydhka sida SharePoint.
Waad ku mahadsantahay bartaada weyn.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado halka ay ka timi tirakoobkan sababtoo ah hay'adda Mozilla Foundation ayaa toddobaadyo ka hor uun sheegtay inay rajaynayaan inay higsadaan 30% sannadka 2008 (june)
Istaatistikadaan waxay ka yimaadeen W3Schools. Waan ka xumahay taas kuma hayn boosta! Waxaan ku cusbooneysiiyey boostada subaxnimadii maanta.
Ilaa ay tirakoobyadan bilaabaan inay iswaafajiyaan shabakadda guud ahaan, runtii macnaheedu maahan wax badan. Waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale daabacdo tirooyinkaaga server.
Waa wax laga naxo in la arko jaantuskan markii aad tixgeliso in degmooyin badani weli ku habboonayn Firefox. Muddo dheer isticmaale Firefox ah, tan ayaa igu waalaysa.
Agoosto 24, 2007 saacaddu markay ahayd 6:50 PM
Waqti dheer IE6 neceb b / c oo aan u hogaansamin CSS, runti waan layaabay markaan arko awood la'aanta IE7 inay qabato, in kasta oo xaqiiqda ah in Microsoft ay sameysay shaqo cadaalad ah oo hubinaysa in cayayaanka qaabka loo xaliyay. Taasi, oo lagu daro xaqiiqda ah in IE7 lagu riixo dadka isticmaala Windows iyada oo loo marayo Cusbooneysiin, waxaad u maleyneysaa in IE6 ay hoos u dhacayso (oo sidaas awgeed, cirka IE7 ee cirka) hadda.
Chris Schmitt wuxuu qoray qoraal gaaban oo gaaban oo kusaabsan kala duwanaanshaha labada daalacasho marka loo eego qaabka qaab ee aan dib ugu eegay qoraalkayga halkan.
Agoosto 27, 2007 saacaddu markay ahayd 7:31 PM
Haddii aad xiiseyneyso, waxaan ku daray a la soco tan tan natiijooyin muhiim ah ku saleysan jawaab celinta akhristaha.
Sep 1, 2007 at 1: 00 PM
Arrin xiiso leh ayaa ah in khasaaraha IE6 uu si toos ah ugu tarjumayo kobaca saamiga IE7 .. ma inaan aqrinnaa macnahan in kobaca Firefox uu ka imanayo isticmaaleyaashii hore ee IE? Tani waxay ahaan laheyd wax dabiici ah in Firefox ay sii weynaato adeegsadayaasha IE si ay markabka uga boodaan, marka loo eego isticmaalayaasha daacadda u ah ee u baxay dhammaan waddooyinka kor loogu qaadayo ee IE4-5-6-7